Ukutshala anyanisi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukutshala anyanisi
Indlela yokutshala anyanisi ebusika
Kungani batsha anyanisi ebusika? Ngokuvamile, ukuvuna okusheshayo, kungakapheli ingxenye yesibili kaMeyi, isivuno singavuna, kanti u-anyanisi ekwindla uvuthwe izinyanga ezimbili noma ngaphezulu kamuva. Futhi, u-anyanisi, ukuhlambalaza phansi emhlabathini, ngaphandle kwalokho ukuthi uvuthwe ekuqaleni, kunamathela kakhulu ezifweni, okungeke kube khona ukunakekelwa kwezinambuzane.
Amathiphu aphezulu okunakekelwa nokutshala kwe-shallots
U-anyanisi - isitshalo esibaluleke kakhulu esitokisini cishe kubo bonke abanikazi bezindlu. Inikeza izitsha zokuzikhethela futhi zithuthukise ukunambitheka kwazo, futhi iphunga eliyisici lihlinzeka ngemikhiqizo yokudla ngephunga elimnandi. Ngokuvamile emakhishini ethu ungathola anyanisi, kodwa kunezinye izinhlobo ezingekho ngaphansi.
Ukutshala kanye anyanisi okhulayo ngendlela yamaShayina
U-anyanisi okhulayo ngendlela yamaShayina kuyindlela enhle kakhulu yokuthola isivuno se-anyanisi esicebile futhi esinempilo, esinezimfanelo eziphakeme kakhulu futhi sigcinwa isikhathi eside. Njengoba kulinywa okunjalo, anyanisi atholakala usayizi omkhulu ngokungavamile, u-orange okhanyayo, omnandi kakhulu. Isici esiyingqayizivele sokuvuna esitholakale ngale ndlela yilokho amakhanda anyanisi anesimo esincane.
Sikhula u-anyanisi we-batun engadini yethu: izici zokutshala nokunakekelwa
Ukuba khona anyanisi akukwazi ukwenza inqwaba yezingubo kanye namalungiselelo, ngoba lesi sitshalo esikhonyisa ukunambitheka kwemikhiqizo futhi sibanika ubukhali. Однако видовое разнообразие этой культуры не ограничивается лишь известным всем луком-пореем, и неплохим альтернативным вариантом является лук-батун, описание которого представлено ниже.
Yini u-anyanisi osikiwe ngaphambi kokutshala, ukulungisa u-anyanisi ku-potassium permanganate nosawoti
Ekuqaleni, inqubo yokwanda anyanisi ayinzima futhi ayikwazi ukuba nezinkinga, kodwa akunjalo, ngoba iningi labalimi libhekene nezinkinga eziningi ezingaxazululwa ngokulandela izincomo zabachwepheshe abanolwazi. Phakathi kwezinkinga eziyinhloko kukhona ukwakheka ngokweqile kwemicibisholo yesitshalo, okunciphisa amathuba okuthola amakhanda amancane anyene.
Indlela yokutshala u-anyanisi we-slizun: imithetho yokutshala nokunakekelwa
Eziningi zokupheka zokupheka zithole anyanisi. Emvelweni, kunezinhlobo zazo eziningi, ezinye zazo zidla. Kusukela kulesi sihloko uzofunda ukuthi umnsalo we-slug uwuphi, i-agrotechnology yokutshala kwayo nokuthi yiluphi uhlobo lokunakekela oludingekayo. Uyazi? I-anyanisi i-slizun idlula zonke ezinye anyanisi ekuqukethwe kwezakhi zokulandelela. Kuyini i-anyanisi ye-slizun I-slizun iyimifino ehlala isikhathi eside eyingxube ye-anyanisi, umndeni we-anyanisi.
Imithetho yokutshala anyanisi ekhanda entwasahlobo
Entwasahlobo ka-anyanisi angasetshala hhayi kuphela emphethweni, kodwa futhi ekhanda. Ngakolunye uhlangothi, kubonakala sengathi ayikho inqubo elula: ukufaka ikhanda elincane emhlabathini, nokuwa ukuvuna isitshalo esikhulu. Eqinisweni, ukuthola umphumela okulindelekile, udinga ukwazi ezinye izici zemifino ekhula ngendlela efanayo.
Ungamaka kanjani imingcele yensimu nokuklanywa
Izihlahla zasendlini: Ukunakekelwa kwesitshalo sekhofi sase-Arabica ekhaya
Ipomoea kvamoklit: izinhlobo, ukutshala nokunakekela
Izindlela zokuvuna pepper ebusika: zokupheka
Izici zokulima i-Pelargonium Ileum ezweni
Kanjani futhi yiziphi izaqathe ezitshala ebusika ngendlela efanele
I-Adapter ye-motoblock: incazelo, idivayisi, ukuthi ungayenza kanjani wena
Ukuvuna okucebile: kanjani ukugcina izaqathe ensimini emhlabathini kuze kufike entwasahlobo?